बाला चतुर्दशी आज, पशुपतिमा दीपदान नहुने, सतबीज छरिँदै : RajdhaniDaily.com
Home Exclusive बाला चतुर्दशी आज, पशुपतिमा दीपदान नहुने, सतबीज छरिँदै
ललितपुर । पितृहरूको मोक्ष र उद्धारका लागि आइतबार बिहान देशभरका शिवालय वरिपरि सतबीज छरिँदै छ । मंसिर कृष्ण चतुर्दशीका दिन परिवारभित्रका सदस्यको दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै धान, जौ, तिल, गहुँ, चना, मकै र कागुनो मिश्रित सतबीज शिवालय वरिपरि छर्ने चलन छ । यसो गर्नाले पितृलाई अन्नको कमी नहुने र उनीहरूले सद्गति प्राप्त गर्ने धार्मिक विश्वास छ ।
बालासुर राक्षसको नामबाट आएको यो चतुर्दशीमा सतबीज छर्नाले मृतकले जीवित अवस्थामा गरेका सम्पूर्ण पाप नाश हुने जनविश्वास छ । सतबीज छर्नाले मृतकले जीवित अवस्थामा गरेका सम्पुर्ण पाप कर्म नाश हुने विश्वास गरिन्छ । सतबीजको एक गेडा अन्न छर्नाले सुन दान गरे बराबरको फलसमेत प्राप्त हुने बूढापाका बताउँछन् ।
मंसिर कृष्ण त्रयोदशीका दिन साँझबाट भोलिपल्ट सतबीज छर्ने बेलासम्म आफ्ना पितृको नाममा बत्ती बाल्ने गरिन्छ । अघिल्लो दिन दियो, कलश र गणेश थापी भर्खरै मृत्यु भएका आफन्तजनको नाम र गोत्र उच्चारण गरी संकल्प गरेर बत्ती बाल्ने गरिन्छ । ठूलो दियो तथा तामाको मानोमा काँचो धाँगोको बत्ती बाल्ने परम्परा छ । रातभर बत्ती बालिरहनुपर्ने र निभ्न दिनु नहुने चलन छ । चतुर्दशीका दिन बिहान स्नान गरी बत्ती खोलमा विसर्जन गरी सतबीज छरेर पूर्णपात्रो गर्ने चलन छ ।
बालाचतुर्दशी पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा गरिने दीपदान यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण भएन । प्रत्येक वर्ष मार्ग शीर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन दिवंगत पितृका नाममा बेलुकीदेखि रातभर पशुपतिमा दीपदान गरी चतुर्दशीका दिन बिहान पशुपति क्षेत्रमा सतबीज छर्ने गरिएकामा यस वर्ष कोरोना महामारी फैलन सक्ने हँुदा भौतिक दूरी कायम गरी दीप दान गर्न असम्भव हुने देखिएकाले बन्द गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । त्रयोदशीको बेलुकीदेखि दीपदान गर्न नदिए पनि चतुर्दशीका दिन आइतबार बिहान भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर सतबीज छर्न सकिने कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए । कोरोना महामारी बढेपछि गएको वर्षको ११ चैतदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर बन्द रहेको छ । पशुपति मन्दिर १ पुसदेखि खुला गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ ।
ललितपुर लेलेको तिलेश्वरलगायतका मन्दिरमा पनि सतबीज छर्नेको बिहानैबाट भीड लाग्ने गरेको छ । मृत्यु भएको वर्षले तीन वर्षसम्म मंसिर कृष्ण त्रयोदशीका दिन बत्ती बालेर सतबीज छर्ने चलन रहेको छ ।
परिवारका सदस्यको मृत्यु भएकाको परिवारजनले दोस्रो वर्षमा शिवालयमा गई बत्ती बालेर चतुर्दशीका दिन सतबीज छरेर हवन गर्नुपर्छ । पण्डित माधवप्रसाद शर्माले भने, ‘सतबीज छर्नुअघि स्नान भएर शुद्ध हुनुपर्छ । अघिल्लो दिन साँझदेखि बत्ती कुरेर बस्ने हुनाले नाचगान र भजनकीर्तन गर्दै धुनी जगाउने परम्परा चल्दै आएको छ ।’
परापूर्वकालमा पशुपति क्षेत्रमा बाला नाम गरेको एक जनाले मान्छे पोल्ने काम गरेर जीविका चलाइरहेको थियो । एक दिन पोल्ने क्रममा मरेको मान्छेको गिदी उछिट्टिएर उसले खाने खानेकुरामा परेछ । त्यो दिनसँगै उसले मरेका मानिसको लास संस्कारका लागि ल्याउनेबित्तिकै लुटेर खाने गरेछ । अन्तिम संस्कार हुन नपाउँदा धेरै जना दुःखी भएका थिए । बाला नामक व्यक्ति राक्षस बन्यो । त्यो राक्षसलाई विभिन्न तरिका अपनाएर मारिएछ । त्यही खुसीयाली र मान्छेको मृत कर्म नपुगेको भन्दै सतबीज र बत्ती बाल्ने काम पशुपति क्षेत्रमा गरिएको भन्ने कथन छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा हाल कायम सदस्य संख्याको बहुमत नपुग्ने अवस्थापछि नेपाली कांग्रेस वैकल्पिक सरकार दाबी गर्नबाट ‘ब्याक’ भएको छ । लामो कसरत र...
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक कार्यालय बन्द हुने भएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोभिड ¬१९ को जोखिम बढ्दो...
नयाँ सरकारको कसरत काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउ पेचिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभा...
काठमाडाैं । आइतबार उच्च अङ्कले बढेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने थामिएको छ । आइतबार ७० अङ्कले बढेको नेप्से आज...
पटक पटक लड्नु र धुलो टक्टक्याउदै उठ्नु मानवजातीको विषेशता : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमण बिरुद्ध लकडाउन निर्विकल्प भएको बताएका छन् । मंगलवार बिहान संवोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक...
बाँसको झ्याङमा बालिका बलात्कार गर्ने पक्राउ
समाज राजधानी समाचारदाता - March 24, 2021 0
झापा । १३ वर्षीया बालिकालाई बासको झ्याङमा लगेर बलात्कार गर्ने पक्राउ परेका छन् । बालिकालाई जर्बजस्ती करणी गरेको अभियोगमा २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको...
Not-to-be-missed Kumar Raut - December 28, 2020 0
लन्डन । इग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुललाई वेष्ट ब्रोमले बराबरीमा रोकेको छ । गएराति लिभरपुलकै मैदानमा भएको खेल १–१ गोलको बराबरीमा...
छोरी भन्दा आमा तरुनी…
रोचक Dhruba Lamsal - February 19, 2020 0
एजेन्सी । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्दै आएका आमा छोरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनेका छन् । उनीहरुलाई सौन्दर्यले चर्चामा पु-याएको हो । जेलिन डियाज र...
Editor-Picks Dhruba Lamsal - August 12, 2020 0
८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रि थपिए, एक मन्त्री र राज्यमन्त्री हटे (सूचीसहित)
Breaking News Dhruba Lamsal - December 25, 2020 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नयाँ मन्त्रीहरू थप गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शितलनिवासमा आजै साँझ राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका...
अक्सिजनलाई अत्यावश्यक प्राथमिकतामा राख
बिचार राजधानी समाचारदाता - April 29, 2021 0
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर गम्भीर रूपमा जनमानसका बीच गहिरिँदै गएपछि अस्पतालमा संक्रमितको भीड लाग्न थालेको छ । बिरामीको भीड लागेसँगै महामारी संक्रमित बिरामीका लागि...
सुदुरपश्चिमका सांसदहरुको सरकारलाई प्रश्न : २८ वर्षयता पश्चिम सेती आयोजना किन अलपत्र ?
प्रदेश Dhruba Lamsal - February 5, 2020 0
काठमाण्डौँ । बहुप्रतिक्षित ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अलमल भएको भन्दै सुदुरपश्चिमका सांसदहरुले एकढिक्का भई तत्काल काम अगाडि बढाउन दबाब...
भेडेटारमा सुरु भयो जिपलाइन
धनकुटा । पूर्वी नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्थल भेडेटारबाट साहसिक खेल जिपलाइन सुरु भएको छ । करिब ३ करोडको लागतमा भेडेटारबाट धरानको देवीथानसम्म व्यावसायिक रूपमा...
काेराेना संक्रमणबाट २०३ जनाकाे मृत्यु, ६१३५ संक्रमणमुक्त